Garyaqaanka Guud oo ka hor yimid Go’aankii ay Baarlamaanka Somalia ku laaleen Amarka Maxkamadda Sare. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Aug 1, 2017
Garyaqaanka Guud ee dowladda Dr. Cusmaan Cilmi Guuleed ayaa soo saaray qoraal uu ku ayidayo xukunkii ay riday Maxkamadda sare ee dalka ee ahaa in dib loogu celiyo doorashada 8-kursi oo muran la geliyay sharci ahaanshahooda.
Garyaqaanka Guud ayaa sidoo kale amray in la dhaqan geliyo xukunka Maxkamadda warqada sumadeedu yahay Ms/119/2017 ee soo baxday 22-kii bishii hore.
Qoraalka ka soo baxay Garyaqaanka Guud ayaa ku socday Guddiga doorashooyinka dadban ee heer Federaal iyo Guddiga doorashooyinka qaran, taasoo micnaheedu tahay in dib loogu celinayo doorashada 8 xildhibaan ee golaha shacabka.
Baarlamanaka ayaa bishii hore laalay amarkii maxkamadda sare ee ahaa in dib loogu celiyo doorashada 8 kursi, waxaana ay buriyeen go’aankaas, iyadoo isla maalintaas Maxkamadda sare ay soo saartay qoraal ay ku amreyso in la dhaqan geliyo go’aanka Xildhibaanada la laalay.
Xog ay heshay hornafrik ayaa sheegaya in illaa 67 Kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ay ku socoto dacwado, taasoo dhici karta in iyana Maxkamadda sare ka soo saarto amar ku aadan in dib loogu celiyo doorashadooda.
Haddii si rasmi ah u dhaqan galo in dib loogu celiyo doorashada 8-kursi ee muranka la geliyay sharci ahaanshahooda ayaa waxay sii xoojin kartaa khilaafka u dhaxeeya hey’adaha sare ee dowladda, waxaana shaki badan la gelinayaa ku lug lahaanshaha arrintan ee Xukuumadda iyo Madaxtooyada, maadaama Garyaqaanka Guud uu yahay La Taliyaha xaga sharciga ee dowladda
faah faahin ku saabsan Qaraxii ka dhacay Kismaayo.